လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု စတော့မယ်ဆိုရင် - Myanmar Network
Posted by Htoo Aung Wint on October 12, 2017 at 10:01 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
(၂၀၁၄)လောက်တုန်းက ညီမငယ်တစ်ယောက်က ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခု စချင်လို့ ဆိုပြီး အကြံတောင်းဖူး တယ်။ သူက (Hotel Life) ထဲကပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ အဆင်ပြေနေပေမယ့် (Life style) ချိန်းချင်တယ်ဆိုပြီးပေါ့။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးလောက်ကို မြို့နယ်အတွင်း ကိုယ်စားလှယ်ယူပြီး ဖြန့်ချင်တာပါ။ အဆင်ပြေပြီဆိုရင် နောက်ထပ်ဆက်စပ်ကုန်ပစ္စည်း လေးငါးမျိုးထပ်ချဲ့ပြီး လုပ်ငန်းကို မောင်းချင်တာပါ။
ဆွေးနွေးကြည့်တော့ လောလောဆယ် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းထဲမှာ လုပ်နေရင်း ကြီးကြပ်မယ်။ နောက်ထပ် ချဲ့ပြီဆိုမှ အလုပ်ကထွက်ပြီး အားစိုက်လုပ်မယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ စိတ်ကူးလေးက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျနေတယ်။ အတွေးသစ်၊ စိတ်ကူးသစ်မဟုတ်ဘူး။ လမ်းသစ်မဟုတ်ဘူး။ ဝန်ထမ်းမလုပ်ဘဲ ကိုယ်တိုင် ရောင်း၊ မောင်း လုပ်နေတဲ့သူတချို့ အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလူတွေက ခက်ခဲချိန်တွေကို ဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ နောက်ထပ်ရောက်လာမယ့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ဆင့်ပွားဖြေရှင်းနိုင်မယ့် အတွေ့အကြုံတချို့ရနေပြီ။ သူမက ခုမှ ကြိုးဝိုင်းထဲကို ဝင်ရမှာ။ ဖောက်ထွက်မတွေးနိုင်ပေမယ့် ဘာပဲပြောပြော အကြံတူ နောက်လူသာစမြဲဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိခဲ့တာပဲလေ။
ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလဲလို့ သူမနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်တော့ (Idear) က ခေါင်းထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ (Plan) က (Paper) ပေါ်ကို မရောက်သေးဘူး။ ကျွန်တော် အဲဒီညီမငယ်အတွက် မေးခွန်းတချို့ ရေးပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ စိတ်ခံစားမှု၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေပါ။ (၃)ပိုင်းခွဲပြီး ရေးပေးလိုက်တယ်။ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကတော့…
1. Are you sure this job have chance for you?
4. Have you new route if your market is developed?
5. Who is sale man?
6. Do you know well his biography? (gambler, ladies killer, story teller)
7. Do you know well your things? (Weak point & Strong point)
8. You may loosed money while examines. Is that amount is you don't care?
9. Do you have lawyer or close friend? (They can suggest you)
10. Some people have " Negative View" . Are you ready for ignore?
ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေက…
1.Resource .(Good shape, New Company, etc…)
2.Quality.(Chinese food are can't through our F.T.O)
3.Another Material.(eg. Shampoo, Hair Conditioning)
6.Keeping Long Time.
7.Height Season.(Short time or long time)
8.Chance for you.
9.Chance for Customers
Organization နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေက…
1.How many partner do you have?
2.Are you respect to him or her?
3.Are they pay attention to you?
4.How much they know about the job?
5.Who is accountant?
6.Who is cashier?
7.Who is Director?
8.If they left behind to your team, can you stand alone?
9.If you leave your team?
10.Do you have plan(A)(B)(C)…?
1.Who is your Sponsor?(Your mother, yourself,…)
2.How to control your money?(I mean that one for sharing, two for ready, three for accident, etc…)
3.If you believe your dream , you should tell me or yourself about" the date of your Goal".
တကယ်တော့ လုပ်ငန်းတစ်ခု စမယ်ဆို အောက်ပါအချက်လေးတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းဖြတ်ရပါတယ်။
ဆိုတဲ့ အခြေခံအဆင့်(၆)ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းရပါတယ်။
ပထမ စိတ်ကူးအိပ်မက် ရှိရပါမယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးမှပဲ ပျော်ပျော်ကြီး စိတ်ကူးယဉ်နိုင်မှာ မဟုတ်လား။
ဘယ်ပုံဘယ်နည်းလုပ်မယ်၊ ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေ ခေါင်းထဲပြည့်လာတဲ့အခါ အစီအစဉ်တွေဟာ စာရွက်ပေါ်ကိုရောက်လာမယ်။
အဲဒါတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်မှာ ငွေကြေးဟာလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ လုံလုံလောက်လောက်ရှိရမယ်။
ကိုယ်ရောင်းမယ့်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုလည်း ကောင်းကောင်းသိရပါမယ်။ ဝန်ဆောင်မှုလား၊ ကုန်ပစ္စည်းလား။ ကိုယ်ဖွင့်မှာက သင်တန်းဆိုပါတော့။ ဒါဟာ ဝန်ဆောင်မှုပဲ။ ကိုယ့်ဆီကိုလာတက်တဲ့ သင်တန်းသားတွေက ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်တယ်။ သင်တန်းသားတစ်ဦးစီတိုင်းက ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးသွားပြီ။ တချို့သင်တန်းတွေက သင်တန်းသားတွေ သင်တန်းချိန်ပြည့် မတက်ကြပေမယ့် သင်တန်းဆင်းချိန်မှာတော့ (Certificate) လေးတွေ ပေးလွှတ်တတ်ကြတယ်။ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်းနှီးလို့၊ အချိန်အခက်အခဲကြောင့်မို့လို့။ တကယ်တော့ မှားပါတယ်။ တကယ်မတတ်တဲ့သူတွေ လက်မှတ်လေးတွေကိုင်ပြီး အလုပ်လျှောက်ကြရော။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ခုခုလွဲချော်တဲ့အခါ အလုပ်ခန့်မိသူက လက်မှတ်ကြီးတော့ ကိုင်လာတာပဲ၊ သင်တန်းက ဘယ်လိုသင်ပေးလိုက်တာလဲ၊ သင်မပေးဘူးလား စတဲ့ စကားသံတွေ ထွက်လာတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ဟာ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်စေ၊ ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်စေ စားသုံးမယ့် (Customer) ရှိဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်တည်ထောင်လိုက်တဲ့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဖို့အတွက်၊ မောင်းနှင်ဖို့အတွက် (Organization) လိုပါတယ်။
ဒါဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ဖို့အတွက် အခြေခံအချက်လေးတွေပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းသစ် စတင်ချင်တဲ့ ညီငယ်၊ ညီမငယ်တို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ စေတနာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။